Nwa amụrụ n’enweghị anya mechara chọta ezinụlọ mgbe nne ya gbahapụrụ ya - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Nwa amụrụ na enweghị anya hụrụ ezinụlọ mgbe nne ya gbahapụrụ ya - SANTE PLUS MAG
Ndi nne na nna nabatara akuko banyere nwa amuru n’afọ nwere otutu olile anya na nro. Agbanyeghị, nyocha izizi nke dọkịta mere n'ihe metụtara nwa amụrụ ọhụrụ nwere ike mgbe ụfọdụ bụrụ onye na-eweta akụkọ ọjọọ na-ekpughe ịdị adị nke ọrịa, enweghị nsogbu d'une ihe ojoo n’ile amụrụ ohuru.
Mama Alexander gbahapụrụ ya mgbe a mụrụ ya
N’ụwa nile, ọ dị mwute na a gbahapụrụ ụmụaka kwa ụbọchị. Dị ka nwatakịrị a dị afọ abụọ gbahapụrụ n'okporo ámá, Alexander K. bụ nwa amụrụ na Russia nne ya gbahapụrụ. Dabere na Argentinian kwa ụbọchị Clarion, nke ikpeazụ kpebiri na ya enweghị ike ilekọta ya, karịsịa n'ọnọdụ ya pụrụ iche. Nke bụ eziokwu bụ na kemgbe ọ bịarutere n'ụwa, ọ na-arịa ọrịa na-adịghị ahụkebe a na-akpọ "SOX2 anophthalmia syndrome" nke e ji mara enweghị bọọlụ anya na-ebute ngụkọta na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe.
Alexander mụrụ na Russia na ugbu a 10 ọnwa ochie Isi Iyi: Valery Kataksin
Otu nọọsụ lekọtara ya mgbe ọ dị naanị ọnwa isii gwara ndị Daily Mail na ya adighi iche na umuaka ndi ozo, na ọ na-egwuri egwu ma na-amụmụ ọnụ ọchị dịka ọ bụla obere ahụ ike na-eme. Ọ na-agbakwụnye, sị: “Ọ hụrụ igwu egwu na igwu mmiri, ọ bụ ezigbo nwa obi ụtọ! ".
"Little Alexander na-akpọkwa Sasha mụrụ n'enweghị anya" Isi mmalite: Valery Kataksin
Ewezuga cysts abụọ dị mma n'egedege ihu ya kemgbe amụrụ ya na nke ga-akwụsịkwa iwepụ oge ụfọdụ, nwatakịrị ahụ na-eme nke ọma ma ọ nweghị ọrịa metụtara ọnọdụ ya n'ihi na ị kwesịrị ịma na Ọrịa SOX2 anophthalmos dị ụkọ nke na ọ na-emetụta naanị otu n'ime ụmụaka 250 ọ bụghị naanị na ọ na-emetụ anya ma akụkụ ndị ọzọ nke ahụ, dị ka akụkụ ahụ nwoke ma ọ bụ nwanyị na ụjọ.
Gọọmentị ga-ekpebi ịkọwapụta nke ugboro atọ? ...
3 arụrụ n'ụlọ nke anụ ụlọ na-acha ọcha ma nye arịa gị ihe ...
Alexander chọrọ nyocha na-adịgide adịgide to nwehe ndu aszurẹlu
Enweghị ike ịhapụ ya ka ọ hụ ụwa gbara ya gburugburu otu ụbọchị, ndị dọkịta nwere ike, n'akụkụ aka nke ọzọ anwuru anya na akwa anya ya ka ihu ya ghara ịgbagọ oge. Ọ ga-achọkwa ịwa ahụ kwa ọnwa isii ka o wee nwee ike iji nnukwu ụwa dochie ha.
Alexander na-arịa ọrịa SOX2 anophthalmos syndrome Isi Iyi: Valery Kasatkin
N'ihi ịnụ ọkụ n'obi ya maka ndụ, obere Alexander enweela ike iji nweta obi ndị niile zutere ya site na nso ma ọ bụ nke dị anya ma nwee omume nke iji ihu ọchị na-aza olu niile ọ maara ọ nwere ike ịnụ. Enwere ike ikuchi ya achọta ezinụlọ na-ahụ n'anya dị njikere ilekọta ya n'ọnọdụ niile. Enwere olile anya na o nwere ike inwe ihunanya na obi nile o kwesiri ka o wee cheta ruo mgbe ebighi ebi na n 'uwa a obughi ndi mmadu hoputara igbapu ya. Dị ka Alexander, nke a nwatakịrị nwoke kpuru ìsì na nwa mgbei na-ezute otu nwoke gbanwere ndụ ya.
Ndị nne na nna na-emeghachi omume n'ụzọ dị iche mgbe nwa ha bu n’afọ nwere nkwarụ
Dika akwukwo ogwu ndi French "Nkwuputa nke idi na nsogbu," mmeghachi omume ndi mmadu na agbanwe ma nwekwaa ike. Fọdụ ka nwere ike itinye aka na ime ihe ike na ọbụnadị nkewa n'etiti di na nwunye ahụ. Na-enweghị ịdabere na mmetụta nke ndị na-eme njem na ụlọ ọrụ nke nwere ike ịkwado ndị nne na nna n'amaghị ama enweghị isi, ọbụna mpụ.
Ọtụtụ n'ime ha na-ejedebe na ọnọdụ nke " ntị chiri Mgbe dibia dibia bekee gwara ha ihe bu eziokwu ma kowaara ha udiri anomaly ahu na otu aga esi akpa agwa n’ime ya. Shockjọ ahụ nwere ike ịchịkwa ha kpamkpam wee mee ka ha daba n'ọnyà nke nghọta na-enweghị nchebe. Agọnahụ a na-agwụ n'ọtụtụ ọnọdụ site na ịtụgharị uche n'ọchịchọ nke agbahapụ. Ndị ọzọkwa na-ewere omume rụrụ arụ ọbụna n'ihu. Dị ka ọ dị na nke a nwatakiri nwoke kpuru ìsì nwuru ike site na enyi nwoke nne ya.
Edemede a pụtara izizi na https://www.santeplusmag.com/un-bebe-ne-sans-yeux-a-fini-par-trouver-une-famille-apres-que-sa-mere-lait-abandonne /
hapụrụmgbenwaezinụlọokokụremmiri ara ehiMAGnNE
TELES RELAY 37199 posts 1 comments
OL: Nke a bụbu Lyonnais kụrụ akara ahụ ma kwụsị Jean-Michel Aulas - FOOT 01
AKWA PALACE: hotellọ nkwari akụ mbụ 2020 na Cameroon - CAMEROON CEO
Gọọmentị ga-ekpebi ịhachikwa nke ugboro atọ ya? - AHUIKE tinye MAG
3 arụrụ n'ụlọ aarnụ vụ na-egbu maramara ma nye arịa gị ọhụụ ọhụrụ ...